Nose Piercing dikan ao amin'ny Baiboly Inona no lazain'ny Baiboly - Hevitry Ny Baiboly
iPhone sembana mifandray amin'ny iTunes 5s
alika tsy manam-paharoa anarana vavy sy dikany
ny fomba fampiasana mahita ny iPhone amin'ny macbook
inona no dikan'ny <4
ny fomba fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra amin'ny iphone
Nose Piercing Meaning Bible
Hevitra manindrona orona ao amin'ny Baiboly?.
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fanindronana?
Fahotana ve ny fanindrohana. Tsy milaza firy momba ny fanindronana ny Baiboly. Tamin'ny andron'ny Baiboly dia mahazatra ny manao kavina sy peratra orona. Ny mpino tsirairay dia afaka manapa-kevitra arakaraka ny feon'ny fieritreretany na hanindrona antsy na tsia.
Ny mpino ve mahavita manindrona?
Fahotana ve ny fanindrohana? . Tsy manana lalàna mazava momba ny fanindrohana ny Baiboly, ka resaka feon'ny fieritreretana no resahina. Raha te-hanindrona ianao dia mametraha fanontaniana vitsivitsy aloha:
Fa maninona no tiako hatao izany? Zava-dehibe toy ny fihetsika ilay fikasana. Aza voatsatoka antsy noho ny antony tsy mety, toy ny fikomiana. Andriamanitra dia miahy kokoa ny fonao mihoatra ny bika aman'endrinao -1 Samoela 16: 7
Azo ekena ve izany eo amin'ny fiarahamonina misy ahy? Ny fanindronana sasany dia ekena kokoa noho ny hafa any amin'ny fiarahamonina sasany. Raha toa ka misy ifandraisany amin'ny zavatra tsy mety, toy ny andian-jiolahim-boto na antokom-pinoana, ny toerana anorenanao ilay karazan-tsindrona tadiavinao, dia aleo tsy atao izany, mba tsy hijoroana ho vavolombelona ratsy - Romana 14:16
Manana fifandraisana ara-pivavahana ve ianao? Ny fanindronana sasany dia natao ho fombafomban'ny fivavahana hafa. Ity karazana fanindronana ity dia toa tsy mampaninona nefa mampidi-doza tokoa ary mampahatezitra an'Andriamanitra
Inona no ho vokatr'izany? Ny fanindronana dia lavaka maharitra ao amin'ny vatana. Eritrereto ny ho avy. Afaka folo, roapolo, telopolo taona, mbola ho tsara tarehy ve? Any amin'ny toerana mora tratran'ny aretina ve? Ho hita eo amin'ny toerana hita maso be ve izany, ka mety hanasarotra ny fitadiavana asa?
Mamela ny feon'ny fieritreretako ve? Raha tsy mamela izany ny feon'ny fieritreretanao dia aza atao izany. Aleo mihavana amin'ny fieritreretana - Romana 14: 22-23
Manindrona ao anaty Baiboly
Ny Testamenta Vaovao dia tsy miresaka momba ny fanindronana. Ny Testamenta Taloha dia miresaka karazana fanindronana telo:
Ho firavaka - nanao kavina ny sofina sy rojo vy teo amin'ny orony ny vehivavy mba hanatsarana ny tenany. Nisy koa lehilahy nanao kavina, arakaraka ny kolontsaina-Tononkira 1:10
Amin'ny fombafomba mpanompo sampy - Ny firenena Isiraely mpifanolo-bodirindrina dia nanapaka ny tenany sy nanao lavaka noho ny maty ary manompo andriamani-diso - Levitikosy 19:28
Ho andevo - araka ny lalàn'i Moizy, ny andevo israeliana rehetra dia tokony hafahana afaka fito taona. Fa raha te-hijanona ho andevo ilay mpanompo, dia tsy maintsy hatsatohana eo am-baravaran'ny tompony ny sofiny ary ho andevo mandritra ny androm-piainany izy - Deoteronomia 15: 16-17
Ny karazana fanindrohana izay melohin'ny Baiboly mazava dia manindrona noho ny antony ara-pivavahan'ny mpanompo sampy, satria fanompoan-tsampy io. Ny mino dia tsy tokony hotevenao ho isan'ny fombafombam-pivavahana hafa. Diso izany.
Tsy raran'ny Baiboly ny fanorohana antsy ny firavaka . Ny firavahana ny tenanao amin'ny firavaka dia mariky ny hafaliana. Nanjary tsy nety ihany izany rehefa ny olona no miahiahy kokoa ny bika aman'endriny fa tsy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny lalàna fanandevozana dia tsy mihatra amin'ny zava-misy eto amintsika.
Izaho efa nanindrona. Inona no ataonao?
Raha nanindrona ianao nefa nahatsapa fa diso Andriamanitra, mibebaha ary mangataha famelana amin'Andriamanitra. Raha azonao atao dia esory ny fanindronana. Hijanona eo ny lavaka fa aza manahy. Mamela heloka foana Andriamanitra izay mibebaka (1 Jaona 1: 9). Raha nibebaka ianao dia afaka tamin'ny fanamelohana.
Iray amin'ireo firaketana voalohany an'ny manindrona orona dia any Moyen Orient, sahabo 4000 taona lasa izay . Ny fanindronan'ny orona dia hita ao amin'ny Baiboly ihany koa, ao amin'ny Genesis of the Bible (24:22), izay amakiantsika fa nanindrona orona volamena (Shanf) ho an'ny vadin'ny zanany lahy ho avy i Abrahama.
Na dia misy ihany koa ny soritra amin'ny kolotsaina hafa, toy ny Berbers of Africa sy ny Bedouins an'ny Moyen Orient , izay manohy mampiasa azy io ankehitriny. Amin'ny kolontsain'ny Bedouin, ny fanindrohana orona dia manondro ny haren'ny fianakaviana.
Ny fanindronan'ny orona dia jerena ihany koa ao amin'ny Kolontsaina hindoa , izay mametraka ny tsindrona orona amin'ny fossa havia ary mampifandray azy, amin'ny alàlan'ny rojo, mankany amin'ny fanindronana eo amin'ny sofina.
Ao amin'ny kolontsainay, nipoitra ny orona teo amin'ireo ny hippies izay nandeha tany India nandritra ny taona 60. Nandritra ny taona 70, ny fanindronan'ny orona dia noraisin'i punks ho mariky ny fikomiana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny tantaran'ny fanindrohana orona isika, satria vita izany, hatramin'ny oviana ary ny fahalianana hafa.
Ny foko sasany dia nametraka ny fanindrohana ny orona ho ampahany amin'ny fanavahana ny foko misy azy ireo, satria ny fomban'ny orona voatsindrona nokaikitra dia efa mihoatra ny 4000 taona, ao anatin'izany ny fomba amam-panao Kristiana sy Hindus.
Ny olona dia nametraka ny fanindronan'ny orony ho an'ny tanjona ara-pinoana sy hatsarana, fa amin'izao fotoana izao, ho an'ny tanora maro ny manindrona orona dia midika fikomiana, ary ny fitevehana orona dia midika fanoherana na fomba iray hanoherana ny lalàna sy fomban'ny fiarahamonina.Midika inona ny fanindronan'ny orona ?.
Manindrona orona ao amin'ny Baiboly:
Ny dikan'ny fanindronan'ny orona ny Baiboly dia manonona manokana ny fitiavan'ny lehilahy vehivavy iray, izay hita rehefa nomen'i Isaka kavina i Rebeka hametahana ny orony, izay mety ho Fanindrohana ny orona.
Manindrona orona amin'ny Hindoisma:
Taloha, ny fanindronan'ny orona dia mifandray amin'ireo angano taloha an'ny Parvathi, zanakavavin'ny Himalaya, sy ny andriamanibavin'ny fanambadiana ary napetraka ho mariky ny toerana ara-tsosialy sy hatsarana.
Amin'izao fotoana izao, ny oron'ny vehivavy dia voatsindrona ny andro talohan'ny fampakaram-badiny. Na izany aza dia voatazona hatrany ny fanao manindrona orona amin'ny vehivavy. Amin'ny andro fampakaram-bady, ny lehilahy dia manala ny ampakarina eo am-bavorony amin'ny orona ho ampahany amin'ny lanonana fampakaram-bady, ary avy eo dia lasa ampahany amin'ny mariky ny fanambadiana.
Ny iray hafa amin'ny finoana manindrona orona:
Ny ampahany amin'ny Hindus dia nanolo-kevitra fa miankina amin'ny toeran'ny fanindronana ny orona, raha ny fitevehana dia napetraka tao amin'ny fossa ankavia dia nanambara ny fanatsarana ny fahavokarana amin'ny vehivavy, na izany aza, ankehitriny ny fanindrohana orona dia tsy apetraka amin'ny vehivavy fotsiny satria io dia toy ny tsara amin'ny lehilahy toy ny amin'ny vehivavy sy ny fanindrohana orona dia tandindon'ny lamaody.
Ary ianao? Misy ve ianao manindrona orona?
Raha tianao ity lahatsoratra ity dia lazao anay ny zavatra niainanao momba ny fanindronana orona na ny fanindronana hafa izay entinao. Azontsika atao koa ny mamaly ny fanontaniana momba ny fomba fanaovana ny fanindronana sy ny hafa!
Mpanelanelana amin'ny faminaniana ao amin'ny Baiboly
Inona no tandindon'ny sokatra iray ao amin'ny Baiboly?
Hevitry ny perla ao amin'ny Baiboly
Inona no dikan'ny vorombola amin'ny Baiboly?
DIKAN'NY FAMINANIANA NY JANAKA AO AMIN'NY BAIBOLY